Mucaawimadii u horeysay ee Xukuumaddu kaga jawaabto Abaaraha Gobollada Galbeedka oo shalay la diray;;;; | Saxil News Network
Mucaawimadii u horeysay ee Xukuumaddu kaga jawaabto Abaaraha Gobollada Galbeedka oo shalay la diray;;;;
Hargeisa (Saxilnews.com)’Gaadiid tiro badan oo ay saaran yihiin Raashin mucaawimo ah, ayaa shalay loo diray deegaammada gobollada Galbeedka Somaliland oo abaaro ba’ani ku dhufteen, taasoo saamayn ku yeelatay nolosha Dadka Xoolo-dhaqatada ah.
nMadaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil, ahna Guddoomiyaha Guddiga Gurmadka Abaara gobollada Galbeed oo ay weheliyaan xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada iyo Xildhibaanno, ayaa ka qayb-galay munaasibad shalay loo qabtay dirista raashinka mucaawada ah, waxaana tallaabadani noqotay markii u horeysay ee xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ka jawaabto baaqyada abaarahaas oo si xun looga dayriyey.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in tallaabadani tahay mid ay xukuumaddu kaga jawaabayso baaqii abaaraha gobolada galbeedka, haseyeeshee Madaxweyne ku-xigeenku si gaar ah uma sheegin deegaannada loo talo-galay in la gaadhsiiyo raashinka, maadaama oo abaaruhu saamayn ku yeesheen deegaano badan oo ka tirsan gobollada Awdal, Selal iyo Gabiley.
Munaasibadda dirista Raashinka Mucaawimada ah waxa kale oo madaxweyne ku-xigeenka ku wehelinayey Masuuliyiinta Hay’adda Ka Hortaga Aafooyinka Dabiiciga ah iyo madax-dhaqameed.